မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲတွင် ဒိုင်ယာနာ၏ လက်စွပ် ဝတ်ဆင်ခဲ့သော မီဂန်မာကယ် - Yangon Media Group
မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲတွင် ဒိုင်ယာနာ၏ လက်စွပ် ဝတ်ဆင်ခဲ့သော မီဂန်မာကယ်
ဗြိတိန်တော်ဝင်မင်းသား ဟယ်ရီနှင့် ထိမ်းမြားလိုက်ပြီဖြစ်သော မီဂန်မာကယ်သည် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲတွင် ဟယ်ရီနှင့်မိခင်ဒိုင်ယာနာ၏ လေးထောင့်ပုံစိမ်းပြာရောင် မြကျောက်လက်စွပ်ကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ ကြောင်း မေ ၂၁ ရက် Contact music သတင်းကဆိုသည်။ တက္ကဆက်နယ်စားကတော် မီဂန်မာကယ်သည် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော ဝေလမင်းသမီးဒိုင်ယာနာကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ဝတ်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုလက်စွပ်ကို ဟယ်ရီက မီဂန်မာကယ်အား လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။
ဒိုင်ယာနာသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အဝတ်အစားများကို ပရဟိတရန်ပုံငွေအဖြစ် လေလံတင်ရောင်း ချခဲ့သောအခါ ထိုလက်စွပ်ကို ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ မြကျောက်နှင့်ပင် လုပ်ထားသော ဟန်းချိန်းနှင့် နားကပ်တို့ကိုလည်း ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ဟန်း ချိန်းနှင့် နားကပ်ကိုမူ မီဂန်မာကယ် ရ မရ မသိသေးပါ။ ဒိုင်ယာနာကွယ်လွန်သောအခါ သားနှစ်ဦးဖြစ်သော ဝီလျံနှင့် ဟယ်ရီတို့သည် သေတမ်းစာအရ ဒိုင်ယာနာ၏လက်ဝတ်လက်စားများကို ရှာဖွေရရှိခဲ့သည်။ ဝီလျံသည်ကြင်ယာတော် ကက်သရင်းကို ဒိုင်ယာနာ၏ ကျောက်မျက်ရတနာများဖြင့် ဆင်ယင်ခဲ့သလို ဟယ်ရီကလည်း ထိုလမ်းစဉ်လိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒိုင်ယာနာသည် သေတမ်းစာထဲတွင် ”ကျွန်မ၏ကျောက်မျက် ရတနာများကို သားနှစ်ဦးအားပေးလိုသည်။ အကယ်၍သူတုို့ အိမ် ထောင်ကျခဲ့သော် သူတို့၏ချစ်ဇနီးများ ဝတ်စားဆင်ယင်နိုင်စေရန် ဖြစ်သည်”ဟု ရေးသားခဲ့သည်။ ဟယ်ရီသည် မီဂန်မာကယ်ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့စဉ်ကလည်း ဒိုင်ယာနာ၏စိန်ပွင့်နှစ်ပွင့် ဖြင့် ၎င်းကိုယ်ပင်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲဖန်တီးထားသောလက်စွပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အီရန်နျူကလီးယားစာချုပ်အပေါ် အီးယူနိုင်ငံများ၏ဆွေးနွေးချက်များသည် အပြုသဘောဆောင်ဟု အီရန်န??
ဗန်းမော်တွင် မိုင်းတစ်လုံးကို ရှင်းလင်းရန် ဆောင်ရွက်စဉ် ပေါက်ကွဲ၊ ကျောင်းဆရာတစ်ဦးနှင့် ??